‘अमेरिका भ्रमणको मेरो प्राथमिकतामा एमसीसी छैन’ : परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ६ असोज । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर आफू लागिपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले भने,‘हामी छिमेकी राष्ट्रहरुसँग अत्यन्तै घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो । परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन्, त्यसकारण सबै दलको सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो ।’
आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनको लागि अमेरिका जान लागेको पनि उनले सुनाए । उनले उक्त अवसरमा आफ्नो सबैसँग भेटवार्ता हुने र महत्वपूर्ण विचार आदानप्रदान हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा एमसीसी प्राथमिकताको लिष्टमा नभएको भन्दै विशुद्ध रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने भएको बताए ।
उनले भने,‘त्यहाँ नेपालको आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गर्नेछु ।’ उनले राजदूत दलविशेषको आधारमा बनाउने विषय नभएको पनि टिप्पणी गरे । अमेरिकाबाट फर्किएर आएपछिमात्रै राजदूत नियुक्तीको प्रक्रिया थाल्ने र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिईने पनि उनको विश्वास छ । उृनले भारत र चीनसँग अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण, घनिष्ठ र सुमधुर सम्बन्ध हुनेपनि विश्वास दिलाए ।
Photo & Video By: Mukunda Kalikote/ReportersNepal
कर्णालीका प्रदेश प्रमुख कलौनीद्धारा अध्यादेश जारी
कैलाली, १० कात्तिक । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले लोकसेवा सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं, १० कात्तिक । बागमती प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठक आज बस्दैछ । आज दिउँसो
भीम रावलको टिप्पणी : राजनीति र अदालतको अबाञ्छित साँठगाँठ अन्त्य हुनैपर्छ
काठमाडौं, ९ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको